Digital Transformation လုပ်ရန် Digital Tools တစ်ချို့ကို မျှဝယ်လိုက်ပါတယ်…
သင်လုပ်ငန်းခွင်မှာ လူချင်းတွေ့ပြီး လုပ်နေကြရတဲ့ အလုပ်တွေ (Offline) အချို့အတွက် အခုလို ရုံးပိတ်ထားကြရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ (Online) ကနေ လုပ်လို့ရမယ့် အခြေအနေကို တဖြည်းဖြည်းဖန်တီးကြဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာပြီဖြစ်ရာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Digital Tools အချို့ကို ကျွမ်းကျင်အောင် သုံးစွဲနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပဲ အလွယ်တကူ Video Meeting တွေကို လုပ်နိုင်ကြမှာပါ…
1. သင်အနေဖြင့် ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက လူလူချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင် လုပ်နေကြရတဲ့အစည်းအဝေး (face-to-face meetings) တွေကို အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး (Online Video Meetings) တွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်း လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ အလေ့အထ ကိုသာ အစပြုဖို့ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ…
a) သင်နှင့် တစ်ခြားတစ်ဦး လူ (၂) ယောက်တည်း လုပ်ရမယ့် Online Video Meetings များအတွက် WhatsApp နှင့် WeChat ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်…
b) လူ (၄) ယောက်အထိ လုပ်ရမယ့် Online Video Meetings တွေအတွက်လည်း WhatsApp ကို သုံးလို့ရပါတယ်၊ အစည်းအဝေးမှာ ပါဝင်မယ့်သူတွေ အကုန်လုံးမှာ တော့ WhatsApp Account ရှိဖို့လိုပြီး၊ WhatsApp Group ဖွဲ့ထားဖို့တော့လိုပါတယ်…
c) လူ (၉) ယောက်အထိ လုပ်ရမယ့် Online Video Meetings လိုမျိုးအတွက်လည်း WeChat Group Video Call ကို သုံးလို့ရပါတယ်၊ အလားတူပဲ အစည်းအဝေးမှာ ပါဝင်မယ့်သူတွေ အကုန်လုံးမှာ တော့ WeChat Account ရှိဖို့လိုပြီး၊ WeChat Group ဖွဲ့ထားဖို့တော့လိုပါတယ်… လုပ်ပုံကတော့ WeChat မှာပါတဲ့ Group Chat ကိုသွားပါ၊ + လက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပါ၊ Voice Call ကိုရွေးပါ၊ Video ကိုတော့ ဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်…
d) Google Duo ကတော့ လူ (၁၂) ယောက်အထိ လုပ်ရမယ့် Online Video Meetings တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်…
e) လူ (၅၀) အထိ လုပ်ရမယ့် Online Video Meetings တွေတွက်ကတော့ Skype ကိုသုံးလို့ရပါတယ်… သုံးရတာလည်းလွယ်ပါတယ်၊ VOA တို့ BBC တို့ တစ်ခြားသော နိုင်ငံတစ်ကာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက သုံးလာတာကြာပါပြီ…
f) လူ (၁၀၀) အထိ လုပ်ရမယ့် Online Video Meetings တွေတွက်ကတော့ အခု လူသုံးများနေတဲ့ Zoom Cloud ကိုသုံးလို့ရပါတယ်… သူ့ကိုသုံးတာကတော့ လူများများသုံးနိုင်သလို မိမိရဲ့ အချက်အလက်လုံခြုံရေး (Data Security) အတွက် သေချာပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်၊ ပြီးရင် ထိရောက်မှု (Effective) ရှိဖို့ မသုံးခင်သေချာပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်…
g) LINE Group Call ကတော့ တချိန်တည်းမှာ လူ (၂၀၀) အထိ Voice Call လုပ်နိုင်ပြီး၊ Video Call ပါလုပ်လို့ရတယ် ပြောပါတယ်…
h) တစ်ခြားသော Tools တွေဖြစ်တဲ့ Houseparty၊ Viber၊ Facebook Messenger တို့ကိုလည်း အသုံးများကြပါတယ်…
2. ဒုတိယအနေနဲ့ သင်လုပ်ရမှာက လူချင်းတွေ့ပြီးပြောလိုတဲ့ မှတ်စုတို့၊ စာတိုတို့၊ အစရှိတဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို Digital အသွင်ပြောင်းပြီး မိမိပို့လိုတဲ့လူတွေဆီကို အချိန်ချိန်တိုတိုအတွင်း ပို့နိုင်ဖို့ Digital Message တွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ပါပဲ…
3. မိမိရဲ့ ရုံးသူရုံးသားတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖတ်တွေ၊ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ မကြာခဏဆွေးနွေးရမယ့် ကိစ္စများစွာအတွက် WhatsApp Group တို့ WeChat Group တို့ကိုဖွဲ့ထားပါ…
4. နောက်တစ်ချက်က ဒီ Digital Tools တွေကို လုပ်ငန်းခွင် (သို့) လူမှုပေါင်းသင်းဆတ်ဆံရေး တို့အတွက် ဆတ်သွယ်ရေး ကိရိယာများ အဖြစ် နေ့တိုင်း အသုံးချတော့မယ်လို့ သင့်ရဲ့ အမြဲတမ်းလူချင်းတွေ့မှ အဆင်ပြေတယ်လို့ ထင်မှတ်နေတဲ့ စိတ်အခံဓါတ် (Mindset) ကို ပြောင်းဖို့လုပ်လိုက်ပါ…
5. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ပုံမှန်လုပ်နေကျအလုပ်တွေ အတွက် အလုပ်ချိန်အတွင်း သာလျှင် အသုံးပြုပြီး ကိုယ်က အိမ်မှာ (သို့) ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ချိန်နောက်ကျရင်တောင်မှ တစ်ဘက်သူကို အနှောက်အယှက် မဖြစ်ရအောင် ညနက်ချိန်တွေမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မလိုအပ်ပဲ ပို့မိတာမျိုးတွေကို ရှောင်ရှားဖို လိုအပ်ကြောင်း မျှဝယ်ရင်း အဆုံးသတ်ပါရစေ…
U Than Aung - CEO